China galvanized tenona wire harato orinasa sy mpamatsy | Ansheng
Galvanized dia tsy vy na firaka; dia dingana iray izay ametahana firakotra zinc fiarovana amin'ny vy mba hisorohana ny harafesina. Amin'ny indostrian'ny harato tariby anefa dia matetika no raisina ho sokajy misaraka izy io noho ny fampielezana azy amin'ny fomba rehetra amin'ny karazana fampiharana rehetra. Izy io koa dia azo vita amin'ny tariby vy ary avy eo ny savonin'ny zinc.
Amin'ny ankapobeny, lafo kokoa ity safidy ity, manome tahan'ny fanoherana harafesina avo lenta kokoa izy io.tsy azo harafesina mafy ny fanoherana vy ho an'ny harafesina harafesina dia miankina amin'ny karazana sy ny hatevin'ny fonosana zinc mitafoina, fa ny karazana tontolo iainana manimba koa antony manakiana.
Ny harato vita amin'ny kofehy vita amin'ny vy dia mora taza-maso amin'ny varavarankely sy varavarana lamba, fa amin'ny fomba maro hafa koa ao an-trano. dia hita ao ambadiky ny sehatra amin'ny valindrihana, rindrina. Ny vy nandrisika dia mety amin'ny fampiharana mari-pana ambony.
· Mandroboka mafana aorian'ny fanenomana harato tariby
· Mandroboka mafana alohan'ny fanenomana harato tariby
· Herinaratra alohan'ny alàlan'ny fanenomana harato tariby
· Herinaratra nohavaozina taorian'ny fanenomana harato tariby
Manaraka: Extruder Filter Series